ब्राण्डेड सुट लगाउन चाहनुहुन्छ ? खुल्यो त इटहरीमा इलिगेन्स - १७ पुष २०२६, बिहीबार ००:००, Purbodaya FM
ब्राण्डेड सुट लगाउन चाहनुहुन्छ ? खुल्यो त इटहरीमा इलिगेन्स
आईतबार ०४भाद्र २०७४ इटहरी न्युजडेस्क-
सुनसरीको इटहरीमा इलिगेन्स सर्टिङ्ग, सुटिङ्ग र टेलरिङ्ग खुलेको छ। इटहरीस्थित संगित चौकमा इलिगेन्स खुलेको हो।आईतबार शुरु गरिएको इलिगेन्सको इटहरी नगरपालिका वडा नम्बर ९का वडाध्यक्ष दिपक गौतमले रिवन काटेर उद्याटन गर्नुभयो।
इलिगेन्स संचालन समुहले स्तरीय कपडा अनि आकर्षक सिलाईको लागि देशका प्रमुख शहरहरुमा सर्टिङ्ग सुटिङ्ग र टेलरिङ्गको काम गरिरेहको छ। यो ग्रुपले काठमाण्डौ, पोखरा, धरानलगायत अन्य शहरहरुमा चेन अफ कमाण्ड अन्तरगत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
सुनसरीको इटहरीका ग्राहकको मागलाई मध्यनजर गर्दै यो समुहले उच्चस्तरीय ब्राण्डेड कपडा चाहने कपडाका शौखिनहरुलाई लक्षित गरेर यो काम शुरु गरेको जनाएको छ।
इलिगेन्समा दक्ष डिजाईनरबाट डिजाईन गरी ग्राहकको आवश्यकता अनुसार दक्ष कालिगढबाट ग्यारेन्टीका साथ उच्च प्रबिधिद्वारा सिलाउने सञ्चालक समुहका अनुप गौतमले बताउनुभयो।
उहाँले गुणस्तरीय कपडाहरुका साथै उच्च स्तरीय ब्राण्डका जस्तै इन्डियन, इटालियन, इङ्गल्याण्डका बिभिन्न कपडाहरु पाईनुका साथै ग्राहकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सुपथ मुल्यमा (माग अनुसारको मुल्यका) कपडाहरु उपलब्ध गराईने बताउनुभयो।
इलिगेन्समा रेडिमेड सुटहरु समेत पाईने भन्दै संचालक समुहका अर्का सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठले इमरजेन्सी रुपमा पनि सिलाउन सकिने बताउनुभयो।
नेपालका प्रमुख शहरहरुबाट डेलिभरी गर्न सकिने भन्दै सञ्चालन समुहका बोधराज पोख्रेलले बिद्यालय, बिभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सँस्थाहरुका युनिफर्मसमेत तयार गरिने बताउनुभयो।
४ भाद्र २०७४, आईतवार १०:३६ मा प्रकाशित
सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउने